नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन बुटवलमा हुने,मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न | Ekhabar Nepal
राजनीति असोज १७ 2078 ekhabarnepal
काठमाडौं, असोज १७ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अव बिगतमा जसरी नै बत्ति निभाएर र मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डलाई चेतावनी दिनुभएको छ ।
बिधान महाधिवेशनको समापन समारोहमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनका केही नेताहरु बिगतमा जस्तै धाँधली गरेर चुनाव जित्ने योजना बनाइरहेको भन्दै ती सवै योजनालाई एमालेले जस्ताको तस्तै जवाफ दिएर बिफल पार्ने घोषणा गर्नुभयो ।
‘जसरी हुन्छ, कब्जा गरेर, मतपत्र च्यातेर हुन्छ कि बत्ति निभाएर हुन्छ चुनाव जित्ने भनिरहेका छन, त्यही योजनामा छन कतिपय दलहरु, तर म सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, अव बिगतमा जस्तो बत्ति निभाएर अनि मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेखे हुन्छ, एमालेले बिफल बनाइ दिन्छ,’ ओलीले भन्नुभयो । उहाँले धाँधली गर्न आउनेलाई एमालेले जस्ताको तस्तै जवाफ दिने घोषणा पनि गर्नुभयो ।
‘एमाले निहुँ खोज्न जाँदैन, निहुँ खोजेर आउनेलाई बाँकी राख्दैन, जस्ताको तस्तै जवाफ दिन्छ,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘हामी अन्याय गर्दैनौं, अन्यायका अगाडि झुक्दा पनि झुक्दैनौं अव गुण्डागर्दी गरेर जित्छौं भन्ने ठानेको हो भने त्यो एमालेले पूरा हुन दिन्न । सवै तयारी गर्नेछ ।’ उहाँले अहिलेबाट स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको तयारी अघि बढाउनु पर्ने भन्दै देशैभरका पालिका तहका नेता कार्यकर्ताको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो । ‘अव बिलम्ब नगरी अधिवेशनहरु गर्नुपर्छ, उम्मेद्वार छनोटका काम अघि बढाउनु पर्छ,’ अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो । त्यस्तै मङ्गिरमा हुने महाधिवेशन बुटलमा हुने समापन समाराेहमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले जानकारी गराउनु भयाे ।
केन्द्रिय निर्वाचन कमिटी घोषणा
नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि केन्द्रिय निर्वाचन कमिटी घोषणा गरेको छ । एमलेले १५ सदस्यीय सदस्य रहने गरि निर्वाचन कमिटी घोषणा गरेको हो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन कमिटीको घोषणा गर्नुभएको हो । निर्वाचन कमिटीमा डा. विजय सुब्बा अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यस्तै कानून व्यवसायीहरु महेश नेपाल, सानुराजा पोखरेल, बाबुराम दाहाल, डा. कंङसाङ लामा, रिता सिंखडा, रञ्जु ठाकुरलगायत रहने गरि १५ सदस्यीय निर्वाचन कमिटी रहनेछन् ।
अन्य सदस्यहरुमा वुद्धिजिवी
भरत पोखरेल, कानून व्यवसायी टंक उप्रेती, सुमित्रा विसी, पवित्रा निरौला र यमकला घर्ती हुनुहुन्छ ।
७० वर्षे उमेर हदको ब्याख्या
नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद कायम राख्दै त्यसको थप व्याख्या गरेको छ । ७० वर्ष पूरा भएपछि कार्यकारी पदबाट बिदा हुने कि नहुने भन्ने विधान महाधिवेशनका सहभागीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपमहासचिव विष्णु पौडेलले ७० वर्ष पूरा नहुँदसम्म कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने बताउनुभयो । कुनै व्यक्ति कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएपछि बीचमै ७० वर्ष पुगेमा पनि उसले सो कार्यकाल भरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पौडेलले बताउनुभयो ।
उदाहरणका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि अध्यक्ष निर्वाचित भएमा यसबीचमा ७० वर्ष पूरा भए पनि उनले पूरै ५ वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँनुहु्ने छ ।
पार्टीको लोगो फेरियो
नेकपा एमालेको ललितपुरमा जारी विधान महाधिवेशनले पार्टीको लोगो संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। आइतबार समूहबाट आएका सुझावको जवाफ दिँदै उपमहासचिव बिष्णु पौडेलले लोगो संशोधन प्रस्ताव पनि राख्नु भएको थियो ।
उहाँले राखेको उक्त प्रस्तावलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले ध्वनी मतले अनुमोदन गरेका छन्।
अबदेखि एमालेको आधिकारिक लोगो सूर्य चिन्हको रातो भुइँमा सुनौलो हँसिया हथौडा अंकित चिन्हसहितको हुनेछ।
उक्त लोगोलाई विधान महाधिवेशनको अन्तमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितले सार्वजनिक गरेका छन्।
एमालेले आफ्नो मोबाइल एप पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसमा केन्द्रीय कमिटीदेखि गाउँ कमिटीसम्मका विवरण उपलब्ध हुने केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए।
एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता संशोधन
नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि तोकिएको योग्यता संशोधन भएको छ । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत मस्यौदामा छलफलपछि सहभागीहरूले दिएको सुझावअनुसार संशोधन गरिएको जानकारी हलमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।
यसअघि तोकिएको पार्टी सदस्य भएको १५ वर्ष हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान हटाएर १० वर्ष कायम गरिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि केन्द्रीय निकायको सदस्य भएको वा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य भएको व्यक्ति योग्य हुने भएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय विभागको सचिव वा सदस्य, जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा दुईपटक सदस्य भएको तथा प्रदेश कमिटी सदस्य भएको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न योग्य हुनेछन् ।
पौडेलले विधान महाधिवेशन हलमा जानकारी दिँदै महिला, दलित,सीमान्तकृत र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा ७ वर्ष सदस्य भएको र एकपटक जिल्ला कमिटी सदस्य भएको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको लागि योग्य बन्नेछ । उपमहासचिव पौडेलले सहभागीको सुझावलाई ध्यान दिँदै नयाँ पुस्तालाई पनि नेतृत्वमा विकास गर्न ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाइने जानकारी दिनुभयो । यसअघि ४१ सदस्य भनिएको थियो ।